GỤỌ NKE Acholi Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Armenian Aukan Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Bassa (Cameroon) Batak (Dairi) Batak (Toba) Belize Kriol Biak Bicol Bislama Boulou Brazilian Sign Language Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chin (Hakha) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chuukese Cibemba Croatian Czech Dangme Danish Douala Drehu Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Filipino Sign Language Finnish Fon French Ga Garifuna Georgian German Greek Greenlandic Guarani Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Herero Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hmong (White) Hungarian Iban Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indian Sign Language Indonesian Isoko Italian Italian Sign Language Japanese Javanese Kabiye Kannada Karen (S'gaw) Kazakh Kekchi Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Latvian Lhukonzo Lingala Lithuanian Low German Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Marathi Marshallese Mauritian Creole Maya Mizo Mongolian Moore Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngangela Nias Niuean Norwegian Nyaneka Nzema Oromo Ossetian Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Ponapean Portuguese Portuguese (European) Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Rarotongan Romanian Runyankore Russian Rutoro Samoan Sango Saramaccan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Sesotho (South Africa) Setswana Seychelles Creole Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Tamil Tarascan Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tiv Tlapanec Tojolabal Tok Pisin Tongan Totonac Tshwa Tsonga Turkish Tuvaluan Twi Tzeltal Tzotzil Ukrainian Urhobo Uruund Uzbek Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Welsh Wolaita Xhosa Yapese Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zapotec (Lachiguiri) Zulu
OTU ỤBỌCHỊ, e nweghị onye ga na-arịa ọrịa, kaa nká ma ọ bụ nwụọ. I nwere ike idị ndụ mgbe ahụ. Ma ugbu a, nsogbu na-echi onye ọ bụla ọnụ n’ala. È nwere ihe nwere ike inyere gị aka taa? Baịbụl nwere ike inyere gị aka inwe obi ụtọ ugbu a. Legodị ụfọdụ nsogbu ndị mmadụ na-enwe taa na otú Baịbụl nwere ike isi nyere ha aka.
INWE AFỌ OJUJU
Baịbụl kwuru, sị: “Ka ụzọ ndụ unu bụrụ nke ịhụnanya ego na-adịghị na ya, ka unu nọ na-enwe afọ ojuju n’ihe ndị dị ugbu a.” —Ndị Hibru 13:5.
Taa, e nwere ọtụtụ ihe ndị mmadụ na-ekwu na anyị kwesịrị inwe. Ma, Baịbụl gwara anyị na anyị ga-enweli “afọ ojuju n’ihe ndị dị ugbu a.” Olee otú anyị ga-esi enwe ya?
Ahụla “ego n’anya.” “Ịhụ ego n’anya” na-eme ka ndị mmadụ na-eme ihe ọ bụla ha nwere ike ime iji nweta ego n’agbanyeghị nsogbu o nwere ike ịkpatara ezinụlọ ha, mmekọrịta ha na ndị enyi ha, àgwà ha na ùgwù ha. (1 Timoti 6:10) Ịhụ ego n’anya abaghị uru. E mechaa, “ego agaghịkwa eju onye ọ bụla nke hụrụ akụ̀ n’anya afọ.”—Ekliziastis 5:10.
Jiri ndị mmadụ kpọrọ ihe karịa ihe onwunwe. N’eziokwu, ihe onwunwe bara uru taa. Ma, ha enweghị ike iji anyị kpọrọ ihe ma ọ bụ hụ anyị n’anya. Ọ bụ naanị ndị mmadụ nwere ike ime ihe ndị ahụ. Inwe “ezi enyi” ga-eme ka anyị na-enwe afọ ojuju ná ndụ.—Ilu 17:17.
IME IHE BAỊBỤL KWURU GA-EME KA NDỤ ANYỊ KA MMA TAA
Baịbụl kwuru, sị: “Obi nke na-aṅụrị ọṅụ bara uru dị ka ihe na-agwọ ọrịa.”—Ilu 17:22.
Ọṅụ nwere ike inyere anyị aka idi ọrịa anyị otú ahụ ọgwụ nwere ike ịgwọ mmadụ ọrịa. Ma, olee otú anyị ga-esi na-aṅụrị ọṅụ mgbe anyị na-arịa ọrịa?
Na-enwe obi ụtọ. Ọ bụrụ na anyị ana-eche naanị banyere nsogbu anyị, “ụbọchị niile” ga na-adị anyị njọ n’anya. (Ilu 15:15) Kama ịna-echekarị gbasara nsogbu anyị, Baịbụl kwuru ka anyị ‘gosi na anyị bụ ndị nwere ekele.’ (Ndị Kọlọsi 3:15) Na-enwe obi ụtọ maka ihe ọma ndị ị na-ahụ n’agbanyeghị otú ha hà. Ile otú anyanwụ si ama mma mgbe ọ na-ada, ikuku ndụ na-ekusa gị, na ọnụ ọchị onye hụrụ gị n’anya mụmụụrụ gị socha n’ihe ndị nwere ike ime ka obi na-atọ gị ezigbo ụtọ.
Na-emere ndị ọzọ ihe. Ọ bụrụgodị na anyị na-arịa ọrịa, anyị ga-achọpụta na “a na-enweta obi ụtọ ka ukwuu n’inye ihe karịa ka a na-enweta n’ịnara ihe.” (Ọrụ Ndịozi 20:35) Ọ bụrụ na ndị ọzọ ekelee anyị maka ihe anyị meere ha, obi ga-adịkwu anyị ụtọ, ya emeekwa ka anyị ghara ịna-echegbu onwe anyị banyere nsogbu anyị. Anyị nwere ike ime ka ndụ anyị ka mma ma ọ bụrụ na anyị ana-enyere ndị ọzọ aka ka ndụ ha ka mma.
DI NA NWUNYE ỊDỊ N’EZIGBO MMA
Di na nwunye nwere ike itisa ma ọ bụrụ na ha anaghị ewepụta nnukwu oge na-anọrị. Di na nwunye kwesịrị iwere alụmdi na nwunye ha ka otu n’ime ihe ndị kacha mkpa ná ndụ ha.
Na-emekọnụ ihe ọnụ. Kama ime ihe na-amasị gị naanị gị, unu kwesịrị ịhazi ka unu na-emekọ ihe ụfọdụ ọnụ. Baịbụl kwuru na “abụọ dị mma karịa otu.” (Ekliziastis 4:9) Unu nwere ike isikọ nri ọnụ, soro megaa ahụ́, gwukọọ egwu ma ọ bụkwanụ mekọọ ihe ndị ọzọ ọnụ.
Gosi na ị hụrụ di gị ma ọ bụ nwunye gị n’anya. Baịbụl gwara di na nwunye ka ha hụ ibe ha n’anya ma na-asọpụrụ ibe ha. (Ndị Efesọs 5:28, 33) Ịmụmụrụ di ma ọ bụ nwunye gị ọnụ ọchị, ịmakụ ya ma ọ bụ inye ya obere onyinye nwere ike ime ka gị na ya dịkwuo ná mma. Di ma ọ bụ nwunye ekwesịghị ikwu ma ọ bụ mee ihe ọ bụla ga-egosi onye na-abụghị di ma ọ bụ nwunye ya na o nwere mmasị iso ya nwee mmekọahụ.—Ndị Hibru 13:4.
“NDỤ M ATỌWALA M ỤTỌ”
Akụkọ Ryoko Miyamoto si Japan kọrọ.
Ihe siiri m ezigbo ike. Di m bụ onye aṅụrụma, n’ihi ya, o nweghị onye kwere ewe ya n’ọrụ. Ọ chọdịghị ịma otú mụ na ụmụ anyị anọ na-eme. N’agbanyeghị otú m si dọgbuo onwe m n’ọrụ, ihe ka siiri anyị ike. M nọ na-eche, sị: ‘Ihe a ọ̀ bụ akara aka m, ka m̀ na-ata ahụhụ ihe m metere n’ụwa mbụ m?’
Ka ihe a nọ na-enye m nsogbu n’obi, otu Onyeàmà Jehova kụrụ aka n’ọnụ ụzọ m. Ọ mụmụụrụ m ọnụ ọchị ma jiri ịnụ ọkụ n’obi gwa m banyere Alaeze Chineke na ndụ ebighị ebi. Ọ gwara m ka mụ na ya mụwa Baịbụl. Obere oge anyị mụwara Baịbụl, mụ amụta na Chineke dị nakwa na o nwere amamihe, na-ekpe ikpe ziri ezi ma hụ anyị n’anya. M mụtakwara ihe na-eme mmadụ ma ọ nwụọ, mụtakwa na ahụhụ m na-ata abụghị n’ihi akara aka.
Nke kachanụ bụ na m chọpụtara na ihe na-eme ka mmadụ na-enwe obi ụtọ bụ onye ahụ na Chineke ịdị ná mma. Ịmụta eziokwu ndị dị na Baịbụl agbaala m ezigbo ume, mee ka m nwere onwe m, meekwa ka obi na-eru m ala. Ndụ m atọwala m ụtọ.
Otú Ị Ga-esi Na-enwe Obi Ụtọ​—⁠Otú E Si Enweta Ya
Ị̀ Na-ewere Onwe Gị Ka Onye Obi Ụtọ? Ọ bụrụ otú ahụ, olee ihe mere iji na-enwe obi ụtọ?